Soomaaliya oo ka mid noqonaysa dalal ciimadmo u diraya dalka Sudaanta koonfureed. – The Voice of Northeastern Kenya
Soomaaliya oo ka mid noqonaysa dalal ciimadmo u diraya dalka Sudaanta koonfureed.
War qoraal ah oo ka soo baxay Urur gobolleedka IGAD ayaa lagu sheegay in dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti ay ciidamo nabad ilaalin ah u dirayaan dalka Koonfurta Sudan si looga dhabeeyo hergalinta heshiiskii dhawaan Koonfurta Sudan iyo mucaaradka ay ku kala saxiixdeen magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethopia.
Urur goboleedka IGAD ayaa sheegay in ciidamadan ay damaanad qaadi doonaan ilaalinta xasiloonida dalkaasi,IGAD ayaana dhaqaalaha ku baxaya ciidamadaan waxay weydiisan doonta jimciiyada qaruumaha ka dhexaysa.
IGAD ayaa sheegtay in Dowlada Soomaaliya laga sugayo aqbalaada codsigooda si ciidamada Soomaaliya ay uga mid noqdaan kuwa wadankaasi la gaynayo.
Dalka Soomaaliya waxaa hada jooga Ciidamo ka socda dalalka Midowga Afrika waxayna ka qayb qaataan sugida amniga xarumah muhiimka ah ee Hay’adaha dowlada iyo dagaalada ka dhanka ah ururka AL-shabaab.
Waxaa Soomaaliya laga sugayaa inay aqbasho codsiga IGAD ee ciidamada nabad ilaalin loogu dirayo Koofurta Suudaan, waxaana go’aanka ugu dambeeya yeelanaya baarlamaanka Jamhuuriyada Fadraalka Soomaaliya, haddii ay soo jeedin kaga timaado wasaaradda difaaca.
← DHAGEYSO Baarlamaanka Soomaaliya oo maalintii labad ka doodaya ammaanka.
HORDHAC: kooxaha Barcelona iyo PSV Eindhoven ee caawa →